ukudayiswa kwezilwane zokudla kwezilwane,Umshini wokugaya i-lievstock feed pellet mill
Amandla:3~ 4kw,isigaba esisodwa noma izigaba ezintathu
Uhlobo lwamandla:ugesi,injini yedizili noma injini kaphethiloli
Ikhono:100~ 150kg / h
umshini wokuphaka izilwane wepellet uluhlobo lokugaya lwe-pelletizing olwenzelwe ngokukhethekile ukwenza amageyimu wokudla wezilwane ngezinkomo, amadada, izinkukhu nolunye uhlobo lwenkukhu. Lo mshini we-feed pellet wenziwa ngokuya nge-ring die isakhiwo design. Uma ufuna ukwenza amabanga aphakathi nendawo amakhulu kuya kwepholiji, ring die feed pellet mill kuyisinqumo esihle.
Isifutho sokudla kwezilwane isetshenziswa kabanzi ngabantu abazalanisa inkukhu, unogwaja, inkomo, imvu, izinkomo, ingulube, njalo njalo. Isizathu esenza ukuthi benze ama-feed pellets ukuthi ama-pellets ahlanganisa inhlanganisela yezinhlobo ezahlukahlukene zokudla okunempilo ukuze kukhule kangcono imfuyo, izinkukhu nezinye izilwane.
Izinto eziwumbala zamamitha wokudla wezilwane:
Izinto zokupheka zalesi silwane se-pellet yokudla kwesilwane zingaba ummbila / ummbila, alfalfa, ukolweni bran, utshani, irayisi, ubhontshisi, ikhekhe lamafutha, njll. Imvamisa, izinto ezinkulu ezingavuthiwe kufanele zidilizwe ngesando semishini. Amaprotheni noma ezinye izakhamzimba nazo zingafakwa ku-powder eluhlaza.
Isicelo sesilwane se-Pellet Mill
* ummbila wokudla wezilwane kufanelekile ukucubungula izinhlobo ezahlukahlukene zokusanhlamvu okuqinile kube ngamapayipi amancane wokudla wezilwane ezinjengezinkomo, inkomo, inyama yenkukhu, unogwaja, ingulube, njll.
* lo mshini wokudla wezilwane we-pellet ulungele ukwenza umbhede wokulala wezitofu zezilwane kusuka kumakhadibhodi.
* Futhi kufanelekile ukucubungula impahla ye-biomass nokunye ukungcola okuningi kwe-agro emapulangweni enkuni kaphethiloli oluhlaza.
Izici ze-Aniaml Pellet Mill
Inezindleko zokukhiqiza eziphansi: Umshini wokugaya ukudla wezilwane awudingi abantu abaningi kakhulu ukuba basebenze. Empeleni, umshini wokudla wepellet wezilwane udinga umuntu oyedwa noma ababili ukuwusebenzisa. Lokhu kunciphisa kakhulu izindleko zabasebenzi ezithinta kakhulu izindleko zokukhiqiza. Izindleko zokukhiqiza eziphansi ziholela ekukhuleni kwe-margin yenzuzo.
Izindleko zokufaka ezincishisiwe: Umshini wokugaya izilwane wepellet ulula futhi omncane yingakho kulula ukuwuthenga nokuwufaka. Udinga kuphela imizuzu embalwa yokuhlanganisa izingxenye ezihlukile. Lokhu kunciphisa inani lemali elidingekayo ukubiza abasebenzi abafanelekile ukuze bayihlanganise. Udinga kuphela isisebenzi esisodwa esifanelekile nesinye ukuze umsize.
Kungumshini wokutshala imali ophansi: Ngenxa yobukhulu bayo obuncane, umshini wokudla wezilwane wepellet udinga indawo encane. Lokhu kunciphisa izindleko zokuqasha indawo enkulu yokuyifaka nesikhathi nesikhathi esidingekayo sokuyifaka.
Inesicelo esibanzi: Umshini wokugaya izilwane wepellet wezilwane uyakwazi ukukhiqiza osayizi abahlukahlukene bama-pellets ezinkukhu ezihlukile nezilwane zemfuyo. Lokhu kusho ukuthi ungondla zonke izilwane zakho usebenzisa umshini owodwa ngasikhathi sinye. Kwenze kwaba lula ukuthi abalimi bavuse izinhlobo ezahlukene zezilwane emapulazini abo.
Ipharamitha yobuchwepheshe beMilon Pellet Encane
Ividiyo yemayini yokudla okuphakayo